सुन्दै अचम्म लाग्ने यो सत्य हो, जहाँ मृत्यु पछि पनि शवको बिहे गराइन्छ ! | Rochak
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on सुन्दै अचम्म लाग्ने यो सत्य हो, जहाँ मृत्यु पछि पनि शवको बिहे गराइन्छ !
जब अविवाहित मृतक महिलाको लास फेला पर्दछ, तब ती शवहरुबीच बिहे गराइन्छ र दुबै शवलाई सँगै गाडिने गरिन्छ । मृतक पुरुषसंग विवाह गराउनका लागि महिलाको चिहानबाट लास निकाल्ने वा महिलाको मृत्यू गरेको केहि घटना बाहिर आएपछि सरकारले यसलाई गैरसरकारी घोषणा गरेको हो । सन् २०१४ मा पूर्वी चीनमा प्रहरीले भूत विवाहमा संलग्न भएको भन्दै ११ जना मानिसलाई गिरफ्तार पनि गरेको थियो ।
यो पनिपढ़नु होस:काठमाडौ । विश्वमा अनौठा र अपत्यारिला घटना भइरहेका छन् । तर सत्यलाई पत्याउन बाध्य नै हुनुपर्छ । मानिसको जीवनमा अनेक संयोगहरु हुने गर्छन् । तर कतिपय संयोग यस्ता पनि हुन्छन्, जो मानिसले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् ।
यस्तै भएको छ, अमेरिकाको फ्लोरिडा बस्ने २४ वर्षीया एक युवती र ७८ वर्षका बृद्धलाई ।
७८ वर्षको उमेरमा एकजना धनी बृद्ध व्यक्तिले २४ वर्षीया युवतीसँग विवाह गरे । बिहेपछि दुबैको जीवन सुखद बितेको थियो । तर तीन महिनापछि भने उनीहरुको जीवनमा भूकम्प आयो ।
तीन महिनापछि युवतीलाई थाहा भयो, आफूले श्रीमान मान्दै आएका व्यक्ति त उनका आफ्नै हजुरबुवा पो रहेछन् । आफ्नो श्रीमानका पुराना तस्वीरहरुको एल्बम हेर्दा उनको आँखा एउटा तस्वीरमा गयो ।
उक्त तस्वीरमा उनका बृद्ध श्रीमान र पहिलो श्रीमती र बच्चाहरुको तस्वीर थियो । उनले सोध्दा पहिलो श्रीमतीको बारेमा श्रीमानले बताए । त्यसपछि श्रीमान मानेर बसेको मान्छे त आफ्नै हजुरबुवा पो परेछ भन्ने स्पष्ट भयो ।
त्यसपछिको अवस्था के भयो होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर अचम्म, सबै कुरा थाहा पाएर पनि यी युवतीले भने आफ्ना हजुरवुवालाई छोड्न चाहँदिनन् । उनको भनाई छ, ‘हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । यौनसम्बन्धदेखि सबै कुरा भइसक्यो । अब त्यो नाता अहिले थाहा भएको हो, त्यसैले मैले छोड्न सक्दिन ।’